Umhla My Pet » Ngaba Yokufumana Uthando Lokwenene umxokozelo?
ukubuyekezwa: Mar. 28 2020 | 3 min ukufunda
kwiminyaka elishumi eyadlulayo ukuthandana online elo ezazingekho, kwaye abo ukwazi ngalo wacinga ukuba umbono ongaqhelekanga kuba ngokwenene 'phandle kukho iintlobo okanye kubantu lithemba abo bangakwazanga ukufumana umhla kwi' ngendlela eqhelekileyo '.
Amaxesha! ukuthandana online nanjengokwesimo ngoku sixakekile, abantu omsebenzi-nye, kodwa ke akukho nje abantu oxakekileyo abangene kuloliwe ukuthandana online – oh hayi! Wonke umntu ukusuka umhlolokazi emnyango ecaleni Uncle wakho Sam kubonakala ngathi oko! Esidala kunye abatsha, amadoda nebhinqa kwiinkalo zonke zobomi, iinkolo, beentlanga neemvelaphi uyenza. ukuthandana intanethi iye yatshintsha into yokuba kuphela 'iintliziyo ulilolo' ingqalelo, kokuba yindlela nzulu zesiqhelo ukuya kumhla. Nditsho ezintle, abantu abaphumeleleyo Uzokwenza oko, kunene kunye wonke umntu! Kuba sonke ndiqonde indlela ekulungeleyo na! Kweli xesha online ukuba uchatha yendalo.
Ngoko ke yintoni elungileyo kunye neengozi ukuthandana intanethi kwaye ngokwenene sinokulindela ukuba uthando lokwenene ngale ndlela?
Kakuhle ezinye zenzuzo zisekuhleni. Ufumana ufikelelo abantu abaninzi kunawe kuba nako ukuhlangabezana ngokuthi ukuthandana nangayiphi yeendlela zemveli. Ukanti oku kuza kunye Ulwamvila kwi ngumsila, ethetha ukuba kukho abantu abaninzi baya kuba nako ukufumana ukuba ngubani na ukuze bangasuki ungathanda ukudibanisa kunye. Kwakhona kukho umlinganiselo othile 'imali ngokukhawuleza' ukuba kunokwenzeka ukuthandana online, leyo ukuba ngaba endiyilungiselele yona, bangazishiya umntu uziva kakhulu betyhafiswa.
Ndichaza ukuthini xa 'imali ngokukhawuleza'? Kulungile nokuba uthetha nomntu omnye imini kunye, kuphela ukuba ngokupheleleyo shwaka loo radar elandelayo. Le yinto eqhelekileyo. Uya kuthuma e-mail ukuba Ungaze wamphendula kwaye kusenokwenzeka ukuba uya kuba ezinye zange ukuphendula nokuba. Yinto zobuqu ngaphantsi lee ezinye iindlela zemveli ukuthandana kwaye oku ikukhathaze abanye abantu. Ndiqaphele oku kubonakala ukuba ukubetha isizukulwana abadala nzima, njengoko zisetyenziswa izenzo ngembeko ngakumbi ukuthandana zemveli, apho umzekelo ubuya ukuxelela umntu ukuba wayengafuni kwakhona ukuthandana kubo, kwaye nje ayinjalo loo online (nokuba sicinga ukuba kufuneka).
Kodwa ke, ukuba uyakwazi ukwamkela ezi sokuva kancinane, Ndicinga kunokuba sisixhobo kakhulu lokukuqhangamshela nabantu, kwaye ewe kuquka lokufumana uthando.
Kunjalo kukho into kangako uthando kunye nangaphezulu 'esesikweni' ngokunxibelelana nge e-mail, kodwa kunokuba isanxwe ukubona ukuba yintoni e-mail ufumana sincokole kunye nomdla uthando ezinokubakho. Kwaye kunjalo ukuba ukufumana echanekileyo 'umntu' kwisigaba ukuthandana, le romance usenokuxubusha ngokulula ngoko.
Kufuneka kwakhona ukuba bazilungiselele yokuba mhlawumbi uya kudibana nabantu abaninzi uya ungalandeli uthando kunye – enyanisweni usenokuba Akanjengazo! Ubani anokuthumela iprofayili kakhulu kodwa xa udibana nabo ehlabathini lokwenene uxhulumaniso nje ayikho. Kwakhona uzigcine kuba kukho ezinye scammers online, abantu abangengabo lokwenene yaye nje phandle ukuzama scam yakho ngemali okanye zobuqu iinkcukacha. akukho ezixhaphakileyo amava am, kodwa khona apho nomxube. Kukho abantu nje 'ukuba fun', abantu online ukhangela ngesondo, kwaye abanye abantu abatshatileyo. Kodwa ke, ukuba ungayilawula le kwaye ungaqalisi de-siqhutywa, ngoko ngokuqinisekileyo unako udibana nomntu intanethi ngubani ogqibeleleyo, kwaye lowo wakuba langutana ebomini, unokwabelana uthando lokwenene. Ndiyazi nakwizibini ezininzi yimpumelelo abaye wadibana le ndlela.
khumbula nje nangona, ude balufikelela buqu yinto yokwenene.
Ngoko ke Ubomi Real = Real Love.
Kwaye kuphela xa uwathatha kunxibelelwano ebomini ngenene o uxhulumaniso wokwenyaniso ukuphuhlisa ulwalamano lothando.